Madaxweynaha oo lakulmay madaxda maxkamadda ciidanka qalabka sida. – Radio Daljir
Madaxweynaha oo lakulmay madaxda maxkamadda ciidanka qalabka sida.
Nofeembar 12, 2016 9:07 g 0
Muqdisho, Nov 13 2016-Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay madaxda Maxkamada ciidamada Qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa kala hadlay madaxda Maxkamada ciidamada Qalabka sida dardargelinta howlaha Maxkamadda.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Ee Ciidamada Qalabka Sida Ee Soomaaliyeed Gen Liibaan Cali Yaroow ayaa Madaxweynaha Soomaaliya , waxa ay uga mahadceliyeen kulanka uu la qaatay , waxaana ay Shahaado Sharaf Guddoonsiiyeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sh Maxamuud.
DHEGEYSO-Ra’iisul wasaare Cumar oo dhaliilay hanaanka federalka ee Soomaaliya.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo Garoowe dib uga bilaabanaysa.